Dhismooyinka & Saldhigyada - Dugsiyada Aagga Robbinsdale
Dhismayaasha & Dhulku waxay bixiyaan taageero maalinle ah oo ay ku shaqeeyaan dhammaan dhismayaasha iyo tas-hiilaadka iyo sidoo kale ka dhigista bay'ad jireed raaxo u leh ardayda, shaqaalaha, qoysaska iyo bulshada. Dhismayaasha & Dhulku waxay haysaa nidaamyada dhismaha iyo dhismayaasha; adeegyada sababaha; waxay bixisaa adeegyo daryeel; wuxuu kormeerayaa mashaariicda dhismaha iyo dayactirka; wuxuu ilaaliyaa u hogaansanaanta xeerarka dhismaha, xeerarka dabka, badbaadada iyo xeerarka deegaanka; wuxuuna kormeeraa nidaamka digniinta dabka iyo dhismayaasha oo dhan.
Adeegsiga / Kiraynta Xarumaha
Adeegsiga Bulshada ee Xarumaha
Adiga oo degan Degmo Dugsiga Deegaanka Robbinsdale, waxaan kuu ilaalinaynaa nalalkayaga. Marka lagu daro shaqada muhiimka ah ee u diyaarinta ardaydeena mustaqbal guul leh, waxaan si xoogan u aaminsanahay in dugsiyadu ay yihiin ilo muhiim u ah qof kasta oo ka tirsan bulshada dugsigeena, yar iyo weynba. Taasi waa sababta Qeybinta Kobcinta iyo Kaqeybgalka Bulshada ee Dugsiyada Deegaanka Robbinsdale ay jadwal ugu sameeyaan una kormeeraan isticmaalka dhismooyinka degmada kahor iyo kadib dugsiga iyo dhammaadka usbuuca. Dadka aan deegaanka aheyn sidoo kale waa lagu soo dhaweynayaa inay kireystaan xarumaha degmada. Guji xiriiriyaha kore si aad waxbadan uga barato.
Si aad uga warbixiso walaaca tayada hawada gudaha (heerkulka, huurka, urta, caaryada, boorka tusaale ahaan) fadlan si faahfaahsan u sharax xaaladda (yada) dhismaha iyo astaamaha la xiriira caafimaadkaaga / caafimaadka ardaygaaga adigoo qoraal u qoraya maamulaha dhismaha ama maamulaha dhismaha. Walaacaaga waxaa loo gudbin doonaa ilaaliyaha dhismaha kaasoo sameyn doona baaritaan faahfaahsan, xalin doona isha iyo talooyinka xalka. Haddii dhibaatada aan la xallin karin, Waaxda Dhismayaasha & Dhulka ama iibiyaha qandaraas baa la siinayaa.
Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan eeg bogga tayada hawada gudaha ee Hay'adda Ilaalinta Deegaanka ee Mareykanka.
Agaasimaha Fulinta ee Xarumaha, Hawlgallada iyo Gaadiidka
Agaasimaha Gaadiidka iyo Dugsiyada Nabdoon
763-504-8137 | Fakis: 763-504-8960
Agaasimaha Kooxda Grounds Crew
Elizabeth_Wrona @ rdale.org